အသစ် | CATRICE COSMETICS
ရာသီတစ်ခုရဲ့ ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းနဲ့အတူ အရည်အသွေးမြင့်မားကောင်းမွန်တဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ ပေါင်းစပ်မှုတို့ CATRICE မှာရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာစင်မြင့်ထက်က နွေဦးနဲ့ နွေရာသီအတွက် အထူးရည်ရွယ် ဖန်တီးထားတဲ့ Collections လေးတွေက ၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့ ပထမနှစ်ဝက်ကာလထဲ မရှိမဖြစ်အလှတရားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ CATRICE က စီစဉ်တင်ဆက်လိုက်တဲ့ အကောင်းဆုံးအလှတရား!
အံ့သြမှင်တက်သွားစေလောက်တဲ့ မျက်ဝန်းအလှ : အချိန်နာရီပြောင်းလဲလာတာနှင့်အမျှ .. မျက်လုံးခြယ်သခြင်းက အဓိကကျလာခဲ့တယ်.. အရောင်ထွက်စူးရှလှပတဲ့ eyeshadow paette တွေကလည်း ခေတ်နှင့်အညီ အများအပြားပေါ်ထွက်လာပါတယ်.. The Superbia Palette 1 နှင့်2ကို .. အရောင်နွေးနွေးလေးတွေ , ကြေးနီရောင်နှင့် အပြာရေခဲမှုန်ရောင်လေးတွေပါဝင်အောင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်.. ဒီ Eyeshadow Paletteတွေက ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အရောင်ထွက်တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်သလို Mini size ဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်နှင့် တပါတည်း ယူဆောင်သွားလို့ရပါတယ်... ခေတ်စားနေတဲ့ ခရမ်းရောင် Smokey colourဟာ Lilac Colour Palette ရဲ့ ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် အရောင်ထွက်တောက်ပမှုကြောင့် လွယ်လွယ်လေးနှင့် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ကာလာကို ရရှိစေတဲ့အပြင် ရောင်းအားကောင်းတဲ့ eyeshadow pencils , eyeliner နှင့် eyeshdaow paletteတွေကနေ စုစည်းထားတဲ့ အရောင်၉ရောင်ပါဝင်ပါတယ်.. Glam & Doll Family ရဲ့ အဆက်အနေနှင့် The Glam & Doll Boost Lash Growth Volume Mascara ဟာ ဆိုရင်လည်း မျက်တောင်တွေကို ကြည့်ကောင်းစေရုံသာမကဘဲ .The Lash Boosterက မျက်တောင်တွေကို ရှင်သန်ကြီးထွားစေပါတယ်.. The Lash & Brow Boost Elixir မျက်တောင်နှင့် မျက်ခုံးမွှေးကို ရှင်သန်ကြီးထွားစေပါတယ်.. အဲ့ထက်ပိုပြီးမှ ကြီးမားစက်ဝိုင်းတဲ့ မက်ျဝန်းအလှကို လိုချင်သူတွေအတွက် .. မျက်တောင်အတုကို တပ်ပေးနိုင်ပါတယ်.. The Magnetic Accent Lashes တွေက ခါတိုင်းမျက်တောင်တွေထက် တပ်ဆင်ရပိုမို လွယ်ကူပါတယ်.. ထူထဲတယ်.. ရှည်လျားတဲ့ မျက်တောင်တွေဖြစ်ပြီး သံလိုက်ပါဝင်တာကြောင့် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာကို တပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်.. မျက်လုံးရဲက အောက်ပိုင်းကို Flawless lookရရှိစေရန်အတွက် .. မတွန့်စေအောင် ဖုံးအုပ်ပေးတဲ့အနေနှင့် .. Liquid Camouflage Under Eye Primer လေး အသုံးပြုပြီး ချောမွတ်တဲ့ အသားအရေရရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါ..
Crystallized Eyeshadow Palette 010 Raise Up Your Voice
Crystallized Eyeshadow Palette 010 Sister Of My Soul
Shimmer ဖျော့ဖျော့ ဒါမှမဟုတ် Matt အရောင်ဆိုးထားတဲ့ နှုတ်ခမ်း ထူထူပြည့်ပြည့်လေးတွေက Makeu-up Look တိုင်းကို ပြီးပြည့်စုံစေပါတယ်.. ဒါကြောင့်မလို့ Lip Gloss, Lipstick, Lip Plumber နှင့် Lip Care Productsတွေက Spring / Summer 2019 ကာလသစ်အတွက်တော့ အံကိုက်ပါပဲ .. ထူထဲလှပတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေက အမှန်တကယ်ကို လိုအပ်ပါတယ်.. အုန်းသီးနှင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ Lip Coconut Balmဟာဆိုရင် အုန်းသီးနံ့မွှေးမွှေးလေးကလည်း စွဲဆောင်မှုရှိစေတယ်.. အဲ့အပြင် နှုတ်ခမ်းသားကိုလည်း အစိုဓာတ်အများအပြားရရှိစေတယ်.. The Volumizing Lip Soufflesဟာဆိုရင် .. Shimmer ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့လေး နှုတ်ခမ်းမှာ စွဲမြဲစေတဲ့အပြင် .. နှုတ်ခမ်းထူထူထဲထဲလေးပါရရှိစေပါတယ်.. The Sheer Beautifying Lip Balmsဟာဆိုရင် .. Shimmer ဖျော့ဖျော့လေးကို ထင်စေပါတယ်.. အမျိုးအစားအသစ်ဖြစ်တဲ့ The Generation Plump & Shine Lip Glossဟာဆိုရင် .. နှုတ်ခမ်းကို သိသိသာသာထူထူထဲထဲဖြစ်စေတဲ့အပြင် .. အရောင်ထင်းထင်းလေး ရရှိစေပါတယ်.. အဲ့ဒီထက်ပိုမိုပြီးမှ နှုတ်ခမ်းကို သာမာန်ထက်ပိုမိုထူးကဲပြီး ဂရုစိုက်သူတွေအတွက် The Powder Plumping Gel Lipsticksတွေဟာလည်း ရာသီအသစ်မှာ နှုတ်ခမ်းနီအမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုအနေနှင့် ပါဝင်လာခဲ့ပါပြီ .. .. တည်ငြိမ်တဲ့အရောင်တွေပါဝင်သလို လင်းလက်တဲ့ပန်းရောင်နှင့် ခရမ်းရောင် အစရှိတဲ့အရောင်ဆန်းလေးတွေကိုပါ ထည့်သွင်းထုတ်လုပ်ထားပါတယ်.. Matt ကိုမှ စွဲစွဲမြဲမြဲနှစ်သက်အားပေးတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်း Coverage ထူထူလေးပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အပြင်.. နငတ်ခမ်းသားကို ကတီပါသားလေးလို ချောမွတ်စေမှာဖြစ်တဲ့ .. Rosewood အရောင်နှင့် Nude အရောင်တွေအပြင် Metallic အပြောင် ၂ရောင်ကိုပါ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ The Generation Matt Comfortable Liquid Lipsticksတွေရှိပါသေးတယ်..
Clean ID - Lip Balm
ရာသီအသစ်မှာ သဘာဝအတိုင်းပြောင်ပြောင်လေးနှင့် ချောမွတ်တဲ့ အသားအရေအမျိုးအစားကို လိုချင်နေကြဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. အသားအရေကို လန်းဆန်းစေတယ် .. ပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်စေပြီး မိတ်ကပ်မလိမ်းထားတဲ့အသွင်အပြင်ကို ရရှိစေဖို့အတွက် The Skin Perfectorက ကူညီပေးမှာပါ .. Primer နှင့် Foundationအစား လိမ်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ .. နူးညံ့တဲ့မိတ်ကပ်အသား Mousseကလည်း ဘယ်အသားအရေကို မဆို တစ်မိနစ်အတွင်း ပြီးပြည့်စုံစေမှာပါ .. ပိုမိုဆန်းသစ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်တာနှင့်အညီ မိတ်ကပ်သားကို မျက်နှာပေါ်မှာ ပိုမို ကြာကြာခံစေဖို့အတွက် သေချာပေါက်ကူညီပေးမှာပါ .. The HD Active Performance Primerက foundationမလိမ်းခင် လိမ်းပေးရမယ့် အခြေခံ primerပစ္စည်းဖြစ်ပြီး .. HD Liquid Coverage Foundationကို အရောင်သစ် ၄ရောင်နှင့် ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး .. အသားအရောင်မညီညာတာကို ညှိပေးမယ်.. လိမ်းရတာပေါ့ပါးစေပြီး .. အဆီမပြန်အောင်လည်းကူညီပေးမှာပါ.. HD Active Performance Freezing Sprayကတော့ မိတ်ကပ်နေရာ မကွက်အောင် မရွေ့အောင် ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်.. Bouncy Bronzer Carribbean Vibesက အသားအရေကို ကာရေဘီယံအသားအရေလို ရွှေညိုရောင်သန်းစေမှာပါ .. Golden Dust Highlighter Dropsက ရွှေဝါရောင် အသစ်ဖြစ်ပြီး .. Shimmerအမှုန်လေးတွေက .. နတ်သမီးရွှေမှုန်လေးတွေလို .. ဟိုက်လိုက်အရောင် ပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်စေမှာပါ.. Glow Illusion Loose Powderကို သူချည်းပဲလည်း သုံးလို့ရသလို .. မိတ်ကပ်ကို မကွက်အောင် နေရာမရွေ့စေရန်အတွက်လည်း သုံးလို့ရပြီး အသားအရေကို ပြောင်ပြောင်ဝင်းဝင်းလေး ဖြစ်စေမှာပါ.. ရလဒ်အနေနှင့် ချောမွတ်နူးညံ့တဲ့ သဘာဝအတိုင်း ပြောင်ပြောင်လေး ဖြစ်စေမှာပါ ..
Glow, Holo နှင့် Nude အရောင်တွေကသာ အသားအရေနှင့် ကိုက်ညီတဲ့အရောင်တွေ ဖြစ်နေတာလား? လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူးနော် !! နောက်ဆုံးပေါ် လက်သည်းနီအရောင်တွေကလည်း အခုခေတ်မှာ ခေတ်နှင့်တပြေးညီလိုက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့် လက်သည်းဆိုးခြင်းကလည်း အဓိကကျလာပါပြီနော်.. Nude Shimmerအရောင်ဖျော့လေးတွေက ဘယ် အသားအရေနှင့်မဆို လိုက်ဖက်ညီပြီး လှပဆန်းသစ်တဲ့ More Than Nude Nail Poslishလက်သည်းလေးတွေကို တခဏအတွင်းပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ.. The Galactic Glow Translucent Effect လက်သည်းနီတွေကို galactic shimmerအရောင်အနေနှင့် အရောင် ၈ရောင်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပိုမိုထူးကဲတဲ့ Special effectsတွေ ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်.. ခေတ်မီတဲ့ holo effectတွေက အကြည့်တွေကို ဖမ်းစားနိုင်မှာဖြစ်သလို .. ကပ်ရလွယ်ကူပြီး ကော်မလိုတဲ့လက်သည်းအတုတွေကိုလည်း ရာသီအသစ်မှာ ရရှိနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်.. အရမ်းကိုလှပတဲ့ .. Nail Sitckerအပြည့်လေးတွေက လက်သည်းကို ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်နှင့် လှပစေမှာဖြစ်ပြီး ပါတီ lookအတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်စေမှာပါ .. သေချာစွာပြင်ဆင်ထားတဲ့ လက်သည်းခွံလှလှလေးတွေကို လှပတဲ့ လက်သည်းဒီဇိုင်းတွေနှင့် ရရှိနိုင်မှာပါ .. Nail Building Base Coatလေးက အရေးကြီးတဲ့ အာဟာဓာတ်တွေကို ဖြည့်ပေးပြီး လက်သက်ကို ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေမှာဖြစ်သလို .. လက်သည်းမဆိုးခင် ပထမအဆင့်အနေနှင့် ဆိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်.. Color Fix & Protect Top Coatကိုတော့ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနှင့် ဆိုးပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး အရောင်ထွက်ကို ပိုမိုတောက်ပြောင်စေမှာဖြစ်သလို လက်သည်းနီကိုလည်း အချိန်ကြာကြာခံစေမှာဖြစ်ပါတယ်..
04 Lucky Smaragd
အလှအပရေးရာအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာ မပါဝင်ဘဲ ပြီးပြည့်စုံတဲ့မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်ခြယ်သမှု ရှိ မလာနိုင်ပါဘူး။ ဘရှပ်ရ်ှတွေနဲ့ ရေမြှုပ် (ဖော့) လေးတွေက ပေါင်ဒါ၊ ပါးနီနဲ့ အိုင်းရှဲဒိုးတို့ ပြင်ဆင်ခြယ်သတဲ့အခါ အပြစ်အနာအဆာကင်းပြီး ချောမွတ်နေစေဖို့ မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ ခပ်ပြားပြား ဆီလီကွန်စုတ်တံလေးက ပျိုမေတို့ မျက်ဝန်းအလှပြင်ဆင်ခြယ်သဖို့အတွက် တိကျသေသပ်စေဖို့နဲ့ ပေါင်ဒါသားအမျိုးအစား၊ ခရင်မ်သားအမျိုးအစား အိုင်းရှဲဒိုးထုတ်ကုန်တွေကို စနစ်တကျဖြေချလိမ်းခြယ်နိုင်ဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းလေးပါပဲ။ ဒီစုတ်တံလေးနဲ့ ခြယ်သပေးမယ်ဆို မလိုအပ်ဘဲ ထုတ်ကုန်အလေအလွင့်လည်း မဖြစ်နိုင်တော့ ပါဘူး။ ဖောင်ဒေးရှင်း၊ မျက်တောင်ကော့ဆေး၊ နှုတ်ခမ်းနီ အဲ့ဒါတွေအပြင် မှန်ငယ်တစ်ချပ် … ပျိုမေတို့ လက် ကိုင်အိတ်ထဲ ဒီထဲက တစ်ခုခုမေ့ကျန်သွားတတ်တာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ အခုရော ဒါမျိုးတွေ ကြုံနေဦးမှာလား? မရှိတော့ပါဘူး။ နှုတ်ခမ်းနီတွေ၊ အိုင်းရှဲဒိုးတွေ ဒါမှမဟုတ် ပေါင်ဒါသားအမျိုးအစားနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ထုတ် ကုန်တွေကို တစုတစည်းတည်း သယ်ဆောင်ယူဆောင်ပေးနိုင်မယ့် StickaMirror Set လေး ပေါ်ထွက်လာပါ ပြီနော်။ ပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်းမှာ အမျိုးအစားအစုံအလင်စုစည်းပေးထားတော့ အသုံးပြုရလည်းလွယ်ကူပြီး သယ်ဆောင်ရတာလည်း အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့။